Ogaden News Agency (ONA) – Dagaaladii Moyale oo Mar Kale Soolaabtay & Khasaare Kadhashay.
Dagaaladii Moyale oo Mar Kale Soolaabtay & Khasaare Kadhashay.
Posted by Dulmane	/ May 8, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Moyale ee dhacda xuduuda Ogadenia iyo Kenya ayaa sheegaya dagaalo waawayn oo khasaare dhaliyay, kuwaas oo u dhaxeeyay dadka shacabka ah ee Soomaalida ah ee kudhaqan magaalada Moyale iyo dadka Oromada ah ee iyaguna kudhaqan deegaanka Moyale.
Dagaaladan oo ah kuwo marar badan soo noq noqday ayaa larumaysan yahay in xukuumada wayaanuhu ay hurinteeda iyo holcinteedaba leedahay, waxayna dagaaladu galaafteen nolosha dad badan oo shacab ah oo kasoo kala jeeda deegaanada lagu dagaalamayo.
Iska hor imaadyadii udambeeyay ee labada dhinac ayaa lasheegayaa in ay yimaadeen kadib markii kooxda Addis Ababa ay dadka shacabka ah ee Oromada iyo maamulka Moyale ee Oromia ku amreen in ay laayaan dadka shacabka ah ee Soomaalida ah iyagoo garab kusiinaya xasuuqa shacabka.
Majiro wax dhex dhexaadin ah oo ciidanka wayaanaha iyo maamul kusheega kajira deegaanadaas ee labada dhinac ay kasameeyeen dhulka lagu dagaalamayay, waxaana lawada ogyahay in ciidanka gumaysigu ay ukala safteen labada dhinac ee dagaalamaya ee Soomaalida iyo Oromada.
Dad aad ubadan oo shacab ah ayaa lasheegayaa in ay saacad kasta gaadhayaan deegaanka Moyale ee dhinaca Kenya, halkaas oo qoxooti ahaan loogu qaabilayo, waxaana lafilayaa in ay siibataan qoxootiga xuduuda gudbaysa maadaama oo dagaaladii ay siisocdaan.
Labada maamul kusheeg ee gumaysiga wakiilka uga ah Oromia iyo Ogadenia ayaa dhankooda warbaahinta isu marinaya hanjabaad iyo handadaad dhinaca afka ah, waxaana saacad kasta dhici kara dagaal lagu hoobto, kaas oo magaalada Addis Ababa laga soo abaabulayo.